देवेन्द्र भट्टराई, उज्ज्वल प्रसाईं / कार्तिक १८ -
भाषाका बारे यस्तै केही सोच्दै गर्दा हामीसँगै रहेका पत्रकार गिरीश गिरी आफ्नो जन्मथलो वीरगन्ज र वनारसबीच समानता खोज्न थालेका रहेछन् । हावापानी मिलेकाले होला उनी नोस्टाल्जिक बने, कविझैं । त्यसमाथि हामी बसेको गाडी गुडाइरहेको चालकले फ्याट्ट भोजपुरी भाषा बोल्यो । गिरीशको नोस्टाल्जिया अझ बाक्लियो । उनी चालकसँग भोजपुरी भाषामा एकछिन गफिए । यो भाषा र ठाउँसँग जोडिएको एक सिरियस इपिसोड थियो । दोस्रो इपिसोड रचियो, होटल पुगेपछि । डायमन्ड होटल । होटलमा कोठा मिलाउने बेलामा आलोचक कुमार कोइराला अर्थात डा. कुकोले भने, 'भाइ हाम को अकेला सुत्ने का कमरा मिलादो । हाम ज्यादा घुर्ते हें, दुस्रोका डिस्टर्ब होगा ।' अब पर्यो फसाद । त्यो होटलवाला डा. कुकोलाई छक्क परेर हेर्न थाल्यो । कुरो कसरी गडबड भयो भने हिन्दीमा 'घुर्नु' भनेको एकोहोरो हेर्नु हो । त्यो बिचरो सोच्दो हो, यो नेपालबाट आएको कवि कस्तो होला जो रातभरि जागै बसेर सँगै सुतेको अर्कोलाई एकोहोरो हेरिरहन्छ । एकछिनपछि कसैले कुकोलाई ठीक शब्द सुझायो । उनले फेरि भने, 'हाम घुर्ते नही भइया, खर्राटे मार्ते है रातभर...।' हिन्दी लवज र भाषा बोल्नुपर्दा लिङ्गवाचक संज्ञाको बुझाइमा आफू कमजोर भएको स्विकार्ने अभि सुवेदी नजिकै मुसुमुसु मुद्रामा थिए । पछि दोबाटे आलुचप खाइरहेका बेला उनले ढुक्कको स्वरमा भने, मेरोजस्तै हिन्दी बोल्नुपर्दा डा.कुकोको पनि लिङ्गवाचक बुझाइ निकै कमजोर रहेछ ।
सारीको साइनो लखनउको भुलभुलैयाजस्तो लाग्ने बनारसका गल्लीहरूमध्ये पनि दिनरात भीड रहने दूधविनायकको एक चियापसलमा उभिएर चिया पिइरहेका बेला भेटिए, भुरेभाइ । बनारसमा जन्मे, हुर्केका बिहारी मूलका भुरेभाइलाई दोहोर्याएर सोध्दा पनि उनी भनिरहेका थिए, मेरो नामै भुरेभाइ !
प्रकाशित मिति: २०६८ कार्तिक १९ १०:५६
कान्तिपुर दैनिक / https://www.kantipurdaily.com/koseli/2011/11/04/255637.html